Filipiana 2:1-11 "1 Koa raha misy famporisihana ao amin’i Kristy, raha misy fampiononana avy amin’ny fitiavana, raha misy firaisana amin’ny Fanahy, raha misy famindrampo sy fiantrana, 2 dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, 3 tsy manao na inona na inona amin’ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana fa amin’ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. 4 Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an’ny namany koa. 5 Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, 6 Izay, na dia nanana ny endrik’ Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’ Andriamanitra, 7 fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; 8 ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana. 9 Koa izany no nanandratan’Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, 10 mba ho amin’ ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin’ny tany, 11 sy haneken’ ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray."
Ireo toetra tsara aterany (1-4). Nisy fifandirana teo amin’ny kristiana tao Filipy ka izany no nahatonga an’i Paoly namerina izao fampianarana ny amin’ny fanetren-tena izao. Ao amin’i Kristy ihany anefa ny mino no afaka miaina izany. Rehefa manetry tena ny mino dia tonga maharitra amin’ny firaisana amin’ny Tompo sy amin’ny mpino namany. Mahavita mangoraka sy miantra sady tia mifanara-tsaina izy. Manao ny namany ho ambony sady mahavita mikatsaka ny soa ho azy koa aza. Kristy no modely (5-8). Amin’ny maha-kristiana ny mpino dia i Kristy no ataony modely, indrindra momba ny fanetren-tena. Na dia efa nanana ny fomban’Andriamanitra sy ny voninahiny hatramin’ny voalohany aza mantsy Izy dia tsy mba nandrangaranga na nifikitra tamin’izany. Niezaka nidina ka nanaiky hitovy amin’ny olona Izy. Nanaiky nitondra ny mafy sy fanasaziana vokatry ny fahotantsika Izy mba hamonjena antsika. Namoizany hatramin’ny ainy aza izany. Vokany (9-11). Tahaka an’i Kristy, asandratr’Andriamanitra ary apetraka amin’ny toerana ambony ny mpino. Omena anarana tsara. Marihina fa ny anarana dia mirakitra ny voninahitra sy ny fahefana ary ny atao. Tahaka an’i Kristy hiankohofan’ny voahary rehetra, dia tonga manaiky antsika izao tontolo izao noho ny asa tsara vitantsika ao anaty fanetrentena sy firaisan-tsaina. Tena nisy vokany teo amin’ny fiainan’ny mpino sy ny Fiangonana ny fanetrentenan’iJesoa. Asaina hanohy izany isika mpino.
Hafatra: Tsarovy fa ny avonavona sy ny fanambanimbaniana dia tsy maintsy hiteraka ady sy fisarahana, fa ny fanetren-tena sy firaisan-tsaina kosa no miteraka fihavanana sy fiombonana maharitra.